INkqubo yeLungu leLungu lokuTshintshana kweLungu ukonyusa ingqesho yeCaribbean
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » INkqubo yeLungu leLungu lokuTshintshana kweLungu ukonyusa ingqesho yeCaribbean
Iindaba zaseAntigua kunye neBarbuda • Iindaba zeBahamas Breaking • Iindaba zeBarbados Breaking • Caribbean • Iindaba zeCuracao Breaking News • Education • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • ISaint Vincent kunye neGrenadines Breaking News • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba zeTurks kunye neCaicos • Iindaba ezahlukeneyo
Inkqubo yeLungu leSandals yeLungu
Icandelo eliphambili lesicwangciso seembadada seNkqubo yokuTshintshiselana yeNgingqi kukonyusa ingqesho ngqo kunye nokunyusa ukubonakaliswa kweCaribbean.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zenza umda kwiNkqubo yokuTshintshiselana kwamaLungu eQela ekudala ikhula kwiqela layo lommandla.
Inkqubo yoTshintshiselwano linyathelo ngeSandals Corporate University kwaye ivumela abantu abatsha ukuba babhaptizwe kwinkcubeko yeeholide.
Le nkqubo isebenza ukomeleza abasebenzi bommandla weSandals kwaye ibonelela ngokuvezwa kunye nobuntununtunu kwinkcubeko, ibabeka njengabemi behlabathi.
Kule minyaka mine izayo, amawaka abantu bamazwe aseCaribbean aza kuxhamla ekunyuseni amathuba engqesho kunye namathuba oqeqesho kwingingqi njengoko iNkqubo yeeTshintsho zeLungu leSandals yeQela (TMEXP) kudala, ifuna ukukhula kwiqela labo lommandla ukusuka kwi-15,000 ukuya kumalungu eqela lama-20,000.
Oku kulandela ukubhengezwa kwetyathanga lokugqibela lokufumana izinto ezintsha, ukwandiswa kwayo ukuya kwisiqithi sesithoba seCaribbean, kunye nolindelo lwayo lokuvuselelwa ngokupheleleyo kwecandelo lokhenketho lommandla emva kweziphumo ezibi zecoronavirus.
Icandelo eliphambili leSandals Resorts International's (SRI) elijolise kwixesha elizayo liQela leNkqubo yokuTshintshana kwamaLungu eQela elibona ukuqhubeka kokuhamba kwabemi baseCaribbean ukuba bathathe izabelo kwiindawo ezininzi zeenkampani kummandla wonke. Inkqubo yoTshintshiselwano linyathelo ngeSandals Corporate University (SCU) kwaye ivumela abantu abatsha ukuba batyibilike kwinkcubeko yeeSandals kunye neelwandle, ngelixa abasebenzi abakhoyo bethunyelwe kwezinye iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, benika ithuba lokuhamba kwaye babonakalise ukusebenza okutsha. Imeko kunye neenkcubeko, ukwandisa izakhono zabo kunye nokuqonda, ukuphucula ukukhula kwabo emsebenzini, kunye nefuthe elihle ekusebenzeni kwemisebenzi yabo ekubuyiseleni kwindawo yabo yokuhlala.
Inkqubo ihlala isibonakaliso esicacileyo sokuzibophelela kwe-SRI kwindibaniselwano yommandla kwaye ngokulinganayo, utyalo-mali kubantu bayo, ekuye kwafikelelwa kuyo ngempumelelo enkulu ngamanyathelo anje ngeNkqubo yoQeqesho yoQeqesho (MTP). I-MTP ichonga kwaye ilungiselela abantu abatsha ukuba babe ngabaphathi kwinkampani ngokufunda ngezandla kunye noqeqesho kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kummandla wonke. Ukongeza, inkampani iyaqhubeka nokwenza imisebenzi yokuqesha abantu kwingingqi ngokubanzi, inikezela ngengqesho eqhubekayo kubemi baseCaribbean kunye nokusebenzisa ithuba leCARICOM's Free Movement of Skilled Persons Agreement.
Usihlalo weSigqeba se-SRI, u-Adam Stewart, uthe inkampani iqinisekile kakhulu ngekamva lezokhenketho kunye nendima ephambili ekhokelwa nguSandals ekubuyiseleni ngokupheleleyo kule ngingqi. “ISandals Resorts International ihleli iyimbonakalo yokwenyani yomoya weCARICOM. Ngelixa lethuba elifutshane, sijolise ekubuyiseleni onke amalungu ethu eqela abuyele emsebenzini, sikwajonge kwikamva kunye neenjongo zethu zaphakathi ukuya kwixesha elide. Ngezibhengezo zethu zeCuracao kunye neSt. Vincent kunye neGrenadines, akukho mathandabuzo ukuba amathuba akhona kungekuphela kwamalungu eqela esele ekho kwiindawo zethu zokutyela eTurks & Caicos, Grenada, Antigua, Jamaica, Barbados, Saint Lucia, kunye neBahamas, kodwa kwakhona abantu abatsha abavela kwezi ndawo zintsha zesiqithi. Siyazingca ngesiko lethu ekuboneleleni ngokukhula kwemida kunye namathuba kubahlali bengingqi ukuba bafunde izakhono ezitsha kwaye babelane ngezabo sele zikhona. ”
Inkqubo yoqeqesho yomthathi-nxaxheba eyahlukileyo, kubandakanya ubude bokuhlala phesheya kunye neenjongo zokufunda, igqitywa ngentsebenziswano nendawo yokuhlala yabucala kunye neSCU. Bonke abathathi-nxaxheba baya kungenisa ingxelo ebonakalayo ekupheleni koqeqesho lwabo kwaye baya kuthi banikwe nabaqeqeshi be-SCU abaza kubanceda kulo lonke uhambo lwabo loqeqesho.
UStewart wongeze ngelithi: “Eyona nto ibalulekileyo kuqeqesho lwethu ibisoloko iyinkqubo yokufunda ngokuntywiliselwa. Kule minyaka idlulileyo, sakhe inkcubeko yeSandals eyomeleleyo neyahlukileyo ethe yasenza sakhokela phambili kwihlabathi liphela. Sifuna abantu bethu batyelele kwezinye iziqithi, bachithe ixesha elisemgangathweni kwaye bafunde koogxa babo nakwabanye abemi. Isiqithi ngasinye sahlukile kwaye ke nganye yeendawo zethu zokulala. Le nkqubo yoTshintshiselwano ayisebenzeli nje ukomeleza abasebenzi bethu bengingqi kodwa ikwabonelela ngohlobo lokuvezwa kunye nobuntununtunu benkcubeko obubabeka njengabemi behlabathi. Ke ngoko, sonwabile kakhulu kukuqinisa le nkqubo kwaye siqalise into esaziyo ukuba izakuqhubeka ukuba ngumzekelo kuqeqesho lommandla, uphuhliso kunye nengqesho. ”
Ukuze ufunde okungakumbi ngeeNkqubo zeYunivesithi yaseSandals, ndwendwela: https://www.sandals.com/about/